Home » Short Story » ကမ္ဘာအတုထဲကလ
ကျနော်တော့ ကမ္ဘာအတုထဲမှာ အစစ်အမှန်တရားတွေ ရှာဖွေနေမိပြီထင်ပါရဲ့ . . . ကိုဆောရိုးရေ
ကမ္ဘာအတုထဲမှာ အစစ်အမှန်ကရှားတယ်ဗျာ … တကယ်.
အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်ကို မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက် ရောက်ခဲ့ပြီပေါ့
ကျုပ်ကတော့ ကမ္ဘာအဟောင်းထဲမှာကျန်နေခဲ့တယ်ထင်ပါရဲ့ :))
တကယ်တော့ ကမ္ဘာဟောင်းဆိုတာ ..လူသားဆန်မှုတွေ အကြင်နာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့နေရာပါဗျာ …
အ​ဟောင်းလား အသစ်​လား အတုလား အစစ်​လား ဘာမှမကွဲပြား ​ဟောင်းသလိုလို သစ်​သလိုလို အတုလိုလို အစစ်​လိုလို နဲ့ ဟိုမ​ရောက်​ ဒီမ​ရောက်​ ကိုယ့်​​နေရာ​လေး​တောင်​​ပျောက်​​လောက်​ရဲ့